. Dhamman Isimada iyo Nabadoonadda Reer Puntland
. Maamulka iyoSiyaasiyiinta Puntland
. Culamaau' diinka Puntland
. WaxgaradkaRag iyo Dumar
. Jaaliyadahadibadaha ee reer Puntland/Jubbaland Guud ahaandadka reer Puntland/Jubbaland
Ujeeddo: Go'aan kasoo baxay haweenka Reer Puntland iyo Kismaayo ee Magaalada London, UK
Shir ay isugu yimaadeen qaybo ka kala socda haweenkabeelaha reer Puntland iyo Kismaayo ee deggan magaalda London [UK] iyo nawaaxigeeda, ayaa looga hadlay arimahamurugsan ee ka taagan Puntland iyo degaanada Jubada hoose, gaar ahaan Kismaayo.
Waxaa haweenku aad uga xumaadeen inqilaabyada siyaasadeed/dhaqaale ee ka taagan Puntland, kaasi oo keenay in uu horseedo dhimasho, dhaawac, kala-qaybsanaan (Polarisation) aan loo baahnayn. Waxaa noomuuqatay in siyaasiyiinta iyo odayaasha beelaha reer Puntland aysan wali ku guuleysan dhibaatada nahaysata ay ku dhameeyaan si nabad ah.
"Geel duqihiisii durduriyeen aarankiisa maxaad mooddaa!!!"
Waxaa kaloo caddaatay inkastoo Issimadii soo jireenkaahaa ay ku dadaaleen wanaag oo dhan in haddana waxaa warku nagu soo gaarayaanin shaqsiyaad magac Issin wataa ay Tuuto u xirteen sidii ay isugu laynlahaayeendadka walaalaha ah. Arrintaas oo ah dhaqan khatar ah oo taasoo hor-seedikartadhibaato ugub (precedence). Sida gabar dhalinyaro ah oo shirka kasooqayb-gashay ay ku maah-maahday, "Geel duqihiisii durduriyeen aarankiisa maxaadmooddaa!!!", waxaa dhab ah in Issinkii sidaas u dhaqma ee cadowga la saftaa inuusan wax xil ah u qaadikarin dadweynaha reer Puntland/Jubbaland taariikhdanauu meel madow ka galidoono uusan masalikarin dadkooda.
Sidaa darted makii aan isla falanqaynay oo si aad ah uga baaran dagnay xaalku halka uu hadda marayo, waxaa haweenka Puntland ee reer London [UK] isla qaateen in loo gudbiyo dhamaan qaybaha aan kor ku xusnay DAREENKOODA IYO LAXAWGOODA arrimaha socda ku aaddan.
1. In qooysaskii qaraabadoodu fitnadaan ku geeriyoodeen ama ku dhaawacmeen laguqanciyo si kastaa iyo sidii lagu daaweynkaro; in dadkii wax kala gaareen dhibkooda lagu xaliyo sidii dhaqanka suubban ahaanjiray.
3. In laga digtoonaado khatarta ay keeni karto marka loo isticmaalo dekadaha iyo air-port-yada dalka sidii meel qof shaqsi ah leeyahay ama loo isticmaalo canshuurta ka soo xeroonaysa dekadda ajende qarsoon oo ay leeyihiin dad aan udanaynayn dadkeenna iyo dalkeenna.
4. Waxaa dhacday maalinti Isniinta ee taarikhdu ahayd 21-kii Janaayo 2002 in sidaandaansi ah oo xilkasnimo la'aan ah iyadoo aan loo meel dayin madfac lalabeegsaday meel deegaan ah ee ka mid ah magaala madaxda Garoowe. In kastoo Eebbe uu naxariistiisa caruurtii iyo shacabkii uusan wax ku yeelin misna waad garankartaan khatarta ay dhacdadaasi leedahay. Sidaas awgeed waxaan kubaaqeynaa in si degdeg ah hubka looga dhigo dadka sida khaldan qoryaha loogu dhiibay laguna magacaabay "MARYO-CALAS" dibna loo dhaqan-celiyo ayagoo loo helayo shaqooyin iyo xirfado ay si xalaal ah ugu noolaadaan.
5. Inciidamada taba-baran ee Daraawiishta iyo Booliska Puntland oo magaca Ilaahey umaray badbaadinta dalkooda iyagoo Eebbe ku tiirsan Issimada iyo shacabkanakaashanaya ay si deg-deg ah u sugaan amniga dhammaan deegaanka Puntland.
6. Waxaan uga digaynaa dadka dibadaha ka tagay intay waddankooda wax u tari-lahaayeen ineysan isku dayin sidii dabka baasiin ugu shubilahaayeen si ay u gaaraan dangaara iskuna layn dhalinyarada jaah-wareersan, caraysan oo cadilan kuwaasoo wax-barasho [haysan].
8. Waxaan kula talinaynaa dadka soo guryo-noqday ayagoo ka faa'ideysanaya wadciga jaahwareerka ah ee dalka ka taagan Puntland iyo Somaaliyoo dhan ama fikrado kale inaysan marna isku dayin iska hor-keenka dadka walaalaha ah iyo wixii amniga Puntland wax-u-dhimikara .
9. Ugudambaystii waxaan dadka reer Puntland ku adkaynaynaa in ay xil iska saaraan nabadaynta dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo midnimadooda kuna dadaalaan inay ka fogaadaan wixii sababikara xassilooni darro ka aloosanta gobolka Geeska Africa.
Allaah awoodda leh waxaan kabaryeynaa in dadkayaga dhibbanaha ah ee lasoo bara-kiciyey uu ka koriyo dhibaatada ay ku jiraan. Waxaan u hambalyeynaynaa una ducaynaynaa Issimada kudadaalay hakinta dagaal sokeeye, wax-garadaka, ururada haweenka Puntland,ciidamada u dhaartay inay difaacaan dalkooda iyo culimaa'u diinka sharafta lehee aan dagaalka hor-seedayn kuwaasoo ku sugan dariiqii Eebbe iyo rasuulka(SCW).
Ugu dambaystii waxaan xusuusanaynaa una ducaynaynaa odayaashii ay ka mid ahaayeen Cali Waraabe, Gurey Haji Yusuf, Ugaas Dakhare, Haji Qoraxay, Haji Abdi-maneeno. Waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii iya goonool la gubay, kuwii baabuurta la dulmariyey sidii Abdirizak Hirsi Dheere, dumarkii la kufsaday iyo kuwii la bara-kiciyey. Waxaan si gaar u xusuusinaynaa haweenka geesiyaasha ee reer Puntland/Jubaland inay dhacdooyinkaas madow xusuustaan oo hadday doonaan cafiyaan laakiin aan marna la ilaawikarin.
1. Sucaad Bashiir Nuur Geeddi
2. Waris Farah Ali Qase
3. Halimo Ahmed Duub-weyne
4. Hawa Haji Abdullahi Shirwac (Qore)
5. Sureer Abshir Muuse Mataan
6. Khadra Bulxan
7. Faadumo Abshir Farax
8. Cadar Hussein
9. Sahra Yuusuf Geelle
11.Caasha Abshir Faarax
13.Sahra Abdi Muuse
14.Hodan Ahmed Mire
15.Suleekho Abdi Barre
16.Abwaanad Siciido Abdi Muuse
18.Saciida Yuusuf Mohame
19.Hawa Maclin Lugay
21.Zeynab Mohamed Jaamac Kaarshe
24.Fatxiya Mohamed Ahmed
25.Saciida Adan Diiriye
28.Hawo Haji Shire
29.Maryan Godo Haji Abdullahi
30.Hawo Geelle Mohamed Kaneec
31.Lul Abdi Muuse
32.Maryan Xoog-weyn Guuleed
33.Khadiija Nuur Kasteeli
34.Maryan Mohamuud Abshir
35.Shamis Mohamuud Abshir
38.Maryan Cali Abdirahman
39.Caasha Xasan Bile
40.Hawa Macalin Adan
45.Badran Adan Seed
46.Ayaan Qaasim Hussein
47.Amaal Abdi Jibriil
48.Ayaan Abdi Jibriil
49.Hiba Adan Hussein
50.Sahra Sheikh Hassan Sheikh Abdirahman
101. TariiqAbdi Shire Godo-godo
Dr. Sureer Abshir Muuse Mataan
Janaayo 24, 2002
AFEEF: Aragtida qoraalkaan waa mid u gaara qorayaasha ku saxiixan .